टेलिकमको एफटीटीएचमा सुविधाको थुप्रो, कम्बो र अन्य अफर प्रयोग गर्न सकिने Bizshala -
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले उच्च गुणस्तरीय इन्टरनेटका साथै भ्वाइस सुविधा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी ल्याएको फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) सेवालाई २०७६ साउन ५ गतेदेखि लागू हुने गरी थप व्यवस्थित गरेको छ ।
यसअघि जडान भएका तथा नयाँ जडान हुने सबै एफटीटीएच प्रविधिबाट सञ्चालित ल्यान्ड लाइनबाट देशभरका अन्य अपरेटरको नेटवर्कमा पनि साउन ५ गतेदेखि कल गर्न सकिने सुविधा स्वतः उपलब्ध भएको छ । नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा सम्पर्क राखी आवश्यकता अनुसार आईएसडी लगायतका विभिन्न सेवा समेत थप गर्न सकिने टेलिकमले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले प्रबद्र्धनात्मक अफर अन्तर्गत यो सेवा लिने ग्राहकहरुका लागि कम्पनीको नेटवर्क भित्र मात्र कल गर्न मिल्ने गरी निःशुल्क भ्वाइस कल सेवा उपलब्ध गराइरहेको थियो । सो अफर असार मसान्तदेखि समाप्त भएकोले साउन ५ गते पश्चात एफटीटीएच प्रविधिमार्फत सञ्चालित ल्यान्डलाइन नम्बरमा पर्याप्त व्यालेन्स नभएमा भ्वाइस कल सेवा बन्द हुन सक्नेछ ।
त्यसैले समयमै मासिक रेन्टल चार्जको रुपमा न्यूनतम २ सय ६० रुपैयाँ रिचार्ज गरी सेवा सुचारु राख्न सकिनेछ । मासिक रेन्टल बापत नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भित्र २ सय ५० मिनेटसम्म निःशुल्क कल गर्न सकिनेछ भने अन्य कलका लागि ल्यान्डलाइन टेलिफोनसरह शुल्क लाग्नेछ ।
नयाँ लाइन जडान गर्दा एक वर्षको इन्टरनेट प्याकेज लिने ग्राहकलाई एक थान सीपीई निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ भने छ महिनाको इन्टरनेट प्याकेज लिने ग्राहकलाई एक थान सीपीईको मूल्यमा रु. ३ हजार छुट उपलब्ध गराइने छ ।
यसैगरी सबै नयाँ जडान गर्ने ग्राहकहरुलाई एकसय मिटर फाइबर निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 'सूचनामार्ग' निर्माणका लागि
काठमाण्डौ । कर्णाली र सु्दुर पश्चिम प्रदेश खण्डमा सूचना महामार्ग...
फेसबुकले लन्च गर्यो नयाँ टुल, अब गुगल फोटोजमा फोटो र भिडियो
काठमाण्डौ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले नयाँ टुल लन्च गरेको छ । जसबाट...
डोटीमा नेपाल टेलिकमको फोरजी सिमकार्ड निःशुल्क वितरण सुरु
डोटी । नेपाल टेलिकमको डोटीस्थित सिलगढी कार्यालयले निःशुल्क रूपमा...
अब नयाँ मोबाइल किन्दा अनुहार स्क्यान गर्नुपर्ने नियम
काठमाण्डौ । चीनका नागरिकहरूले अबदेखि मोबाइल फोन सेवा लिन आफ्नो...
फेसबुकले ल्यायो प्रयोगकर्ताले पैसा कमाउने एप, सर्भे र
काठमाण्डौ । लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ ले आफ्नो दायरा...
गुगलको स्मार्टफोनमा कमजोरी पत्ता लगाउनुहोस्, रु. १७.२५
काठमाण्डौ । आफ्ना केही एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा भएका सुरक्षा त्रुटि...
साथीभाइसँग रु. २५ सय लिएर काठमाण्डौ छिरेका एक युवा �
– भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । भनिन्छ ‘सपना देख्नेहरू कहिल्यै...
एप्पलको ‘सिरी’ बन्दैछ अझै स्मार्ट, बुुझ्नेछ प्रयोगकर्ताको
काठमाण्डौ । गुगल तथा एप्पलजस्ता टेक्नोलोजी कम्पनीहरुले आफ्नो...